“Biyaha Hargeysa dhibaato weyn ayaa ka taagnayd 20-kii sanadood ee la soo dhaafay, waayo”….. | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargeysa(SDWO.com): Mareeyaha Wakaaladda biyaha Hargeysa Ibraahin Siyaad Yoonis, ayaa sheegay mashruuca biyo balaadhinta caasimadu uu hadda dhamaad yahay, isla markaana ay hadda diyaar yihiin ceel biyood oo lagu soo kordhiyay biyo soo saarka Geed-deeble.
Waxaanu sheegay in mashruuca biya balaadhinta caasimada Hargeysa oo sanadihii ugu danbeeyay ay hawshiisu socotay uu imika gabo gabo ku dhaw yahay, intiisii badneydna ay dhamaatay.
Ibraahin Siyaad Yoonis, oo maanta warbaahinta la hadlay, waxa kale oo uu tilmaamay in lacagta mashruucani ku baxday ay bixinayaan labada qaadhaan biyee ee Sanduuqa Horumarinta Somaliland Iyo Midowga Yurub.
Isagoo arrimahaa ka hadlayay-na waxaa uu yidhi “Mashruuca biyo balaadhinta caasimadda Hargeysa mudo sanad iyo badh ah ayuu socday, waana mashruuc aad u balaadhan, waxaana qaadhaankiisa bixiyay labada qaadhaan bixiye ee Sanduuqa horumarinta Somaliland iyo Midawga Yurub.
Mashruucani-na waa mashruuc aad u weyn, oo aad u balaadhan, shirkada ilaalisaa waa shirkad Jarmal ah. Shirkadaha wadaa way badan yihiin, laakiin shirkadaha gacanta ku hayaa waa shirkad Itoobiyaan ah iyo mid Faransiis ah, inta bada-na mashruucan shaqadiisii way dhamaatay”.
Maareeyuhu waxa kale oo uu xusay in saddex ceel oo deegaanka Horaa-haadley laga qodayay ay imika gabo gabo yihiin waxaanu yidhi “Tuulada Hora-Haadley oo kale saddex ceel oo laga qodayay waa ay dhamaadeen, dhismayaashi waa ay dhamaadeen qalabkii oo dhami waa uu dhameystiran yahay, beebabkii biyaha waa lagu xidhan, iyo daynabooyinkiiba.
Ceelka No-13 isagu waa uu dhameystiran yahay oo waa laga falaxashay,waxaa ugu weyn ee imika aanu ku mashquulsanahay waa beebka ugu weyn ee ka imanayay Hargeysa iyo Geed-deeble oo isaga shaqadiisa badankeedu dhamaaday, oo aanu Insha Allah Ilaahay ka rajeynayno inuu noo dhameystiro”.
Waxaanu intaas ku daray “Biyaha magaalada Hargeysa dhibaato weyn ayaa ka taagnayd dhawr iyo labaatankii sanadood ee la soo dhaafay, waayo magaalada Hargeysi waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu koritaanka badan qaaradan Afrika.
Taasina waxay sababtay in biyo la,aan badani ay soo food saarto, biyaha magaalada Hargeysa yimaada qiyaas ahaan waxay dhan yihiin ilaa sagaal milyan oo litir inay yimaadan habeenkii iyo maalintiiba.
Markaa marka mashruucani dhamaado waxaanu rejaynaynaa in ay yimaadan ku dhawaaad ilaa 20-milyan oo litir, mustaqbalkana Insha Allah laga sii kordhiyo markaa waxaanu rajeynaynaa in biyo la,aanta caasimada Hargeysa ka taagan laga reysan doono”ayuu yidhi maareeyaha wakaaladda biyaha Hargaysa.
Dhinaca kale Ibraahim Siyaad, waxa uu sheegay in mashruucani ay shaqo ka heleen dad badani. Waxaanu yidhi “Dhanka kale waxaa mashruucan ka hawl galey oo shaqooyin ka helay shaqaale aad u fara badan.
Waxaana laga yaaba in maalintii oo kaliya ay shaqaale kor u dhaafaya laba boqol oo qof ay ka shaqeeyaan, gaadiid faro badan ayaa ka shaqeeyaa, markaa mashruucani biyahaba marka laga tago shaqo ayaa laga helay”.